WARBIXIN: Maxaad kala socotaa markii uu Lionel Messi labo mar ka ooysiiyey Neymar Jr? – Gool FM
WARBIXIN: Maxaad kala socotaa markii uu Lionel Messi labo mar ka ooysiiyey Neymar Jr?
(Barcelona) 07 Agoosto 2019. Xiddigaha ugu sameynta badan xiddigaha casrigan ka soo jeeda Waddanka kubadda cagta lagu xusheeyo ee Brazil, Neymar JR ayaa inta badan lagu dhaleeceeyaa iyo in uu hoos kaga dhacay sidii laga filayay.
Naymar Jr waa mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican, haddii uusan ahaynka kan saddexaad, isagu waa kan afaraad ee ugu wanaagsan dhamman xiddigaha caalamka, waxaana uu in badan ku tartamay abaal-marinta xiddiga adduunka.
Xusuusta jaceylka Lionel Messi iyo Neymar waa mid weyn, balse miyaad adiga xasuusataa markii uu Messi labo mar ka ooysiiyay saaxiibkiisa reer Brazil ee Neymar JR?.
Haddaba warbixintaan oo xiiso leh, waxaa inoo diyaariyey Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho, waxaana soo jeedinaya Haaruun Yuusuf Khasaaro iyo Muniir Maxamed Xasan.
Xilliga uu tijaabada caafimaadka u mari doono Lukaku Inter Milan oo la shaaciyay
David Luiz oo muujiyay calaamad ka tarjumeysa sida uu ugu dhowyahay inuu ku biiro kooxda….